samedi, 27 novembre 2021 16:42
Covid-19 : Mitombo hatrany ny isan'ireo voa
Teo anelanelan'ny 20-26 novambra 2021, dia tafakatra 258 ireo tranga vaovao nahitana ny otrikaretina Covid-19. Analamanga no tena betsaka tratra 114, Vakinankaratra 54, Menabe 30, Anosy 27, Matsiatra ambony 23, Ihorombe sy Sava ary Atsinanana 2 avy, ary 1 avy Vatovavy Fitovinany, Melaky, Itasy, Amoron'i Mania. 13 kosa no marary mafy na formes graves, ary tsy nisy ny maty, fa 148 no sitrana. Nahatratra 967 ireo namoy ny ainy tamin'ny resaka Covid-19 ity teto Madagasikara, tamin'ireo 44 330 voamarina nitondra ny otrikaretina.42 915 kosa ireo sitrana, ary 283 728 ny isan'ny fitiliana hatramin'izay, raha 5879 ny fitiliana natao ny herinandro nodiavina ity. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 27 novembre 2021 10:31
Manandona - Antsirabe : Nivadika ambony ambany ilay kamiao nisongona Sprinter
Kamiao be iray mpitatitra vato no nivarina an-tanimbary, teo Soaray Ambohipano, Kaominina Manandona, omaly zoma 26 novambra 2021 tolakandro. Araka ny filazan'ny nanatri-maso dia hisongona Sprinter amin’ny lala-mahitsy sy mazava tsara amin’ny lalam-pirenena faha-7 ilay kamiao no nivarina ambony ambany tany an-tanimbary vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily. Tsy nisy aina nafoy, saingy samy naratra avokoa ny mpamily sy ny olona nentiny. Simba ny kamiao, niparitaka ny entana.Efa nahazo fitsaboana ireo maratra, ary tsy misy atahorana ny ainy. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 25 novembre 2021 19:16
Olan’ny rano : Ela niaretana ny mponin’Ambatomaro
Teny amin’ny arabe ny mponin’Ambatomaro no naneho ny alahelo, miaro hatezerana omaly manoloana ny fijaliana amin’ny rano. (Jereo Sary Tohiny)
Nisy namaky ny faran'ny herinandro teo iny ny hopitaly ao Antsakabary, Distrika Befandriana Avaratra, Faritra Sofia. Lasan’ny jiolahy tamin’izany ny vola rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
Fiompiana : Ahitana trangan’aretina fivalanana mahazo ny omby koa any Arivonimamo
Efa ahitana trangan’aretina fivalanana mahazo ny omby ao amin'ny Distrika Arivonimamo, Faritra Itasy ankehitriny raha toa ka tao Antsirabe II, Vakinankaratra no niandohany iray volana lasa izay. Mivalana mipiriritra be ny omby voany, hoy ny tantsaha mpiompy ; mahia andro aman’alina, ary misy maty mihitsy izay tsy voavonjy ara-potoana.
mardi, 23 novembre 2021 17:57
Herinaratra : Midina 60% ny famokarana amin'izao fotoana izao
Maina ny tany, miakatra ny hafanana, mihantona ny orana, ritra ny rano, vokany mihena ny angovo vokarina. Midina 60% ny famokarana herinaratra amin'izao fotoana izao, hoy ny avy eo anivon’ny ministeran’ny angovo sy ny akoran’afo.
mardi, 23 novembre 2021 11:56
Parc Tsimbazaza : Nidoboka eny Antanimora ny Tale
Niakatra fampanoavana i Randrianirina Jasmin Emile, talen'ny PBZT (Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza) omaly alatsinainy 22 novambra 2021 teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly (PAC), ka dia nidoboka eny Antanimora ity tale ity. Fanodinkodinam-bolampanjakana, fanomezana tombondahiny olom-pantatra, ary fanamparam-pahefana (Détournement de deniers publics, favoritisme, abus de fonction) no iampangana azy.
Efa herinandro maromaro izao no tsy ahitana vaksinin-jaza BCG sy Polio atete am-bava eny amin’ireo toeram-pitsaboana miankina amin’ny fanjakana. Maro amin’ireo zaza vao teraka no tsy mbola nisitraka vaksiny. Tonga eny amin’ny CSB sy « Maternité » mitondra ny zanany ireo reny, saingy miverim-potsiny ary tsy nampahafantarina mazava izay fotoana ahatongavan’ireo vaksiny ireo. Manahy ny amin’ny ho fahasalam-janany ireo ray aman-dreny manoloana izany tsy fisiana vaksiny sy ny fitarazohan’ny famatsiana izany, ny toetr’andro rahateo efa miovaova ka mamparefo ny fahasalamana, ary tato ho ato dia tsikaritra fa betsaka ireo zaza tratry ny tsy fahasalamana entina manantona ireny hopitalin’ny Reny sy ny zaza ireny.
Jiolahy roa avy nangalatra omby tany Anjozorobe no tra-tehaky ny Zandarimariam-pirenena miasa ao Andaingo ny Alarobia 17 novambra 2021 lasa teo. Enin-dahy izy ireo no niaraka fa tafaporitsaka ny efatra, ka ireto roalahy ireto ho hitan’ny olona mihaodihaody sady mampiahiahy tao Andaingo ka nisy nampandre avy hatrany ny zandary ao amin’ny “Poste Avancé” Andaingo. Nanao ny vela-pandrika ireto farany ka tra-tehaka izy roalahy niaraka tamin'ny basy sy antsy lava. Natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Moramanga izy ireo, ary nampidirina am-ponja avy hatrany.
vendredi, 19 novembre 2021 09:57
Andriampamaky : Nianjera ny « pylône » izay hitarika delestazy
Nisy nanapaka ny « hauban » na ireo vy « tendeur » mitazona ny « pylône » mijoro mahitsy eny Andriampamaky, araka ny fampahafantarana nataon’ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo, Andry Ramaroson. Miteraka fihenan’ny tanjaky ny herinaratra avy any Mandraka izany, ary dia hisy delestazy hoy ny minisitra.